सहकारीको भूमिका महत्वपूर्णः सांसद खतिवडा
उर्लाबारीः मोरङ क्षेत्र नं. १ का सङ्घीय सांसद घनश्याम खतिवडाले देशको आर्थिक विकासका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
उर्लाबारीमा आइतबार हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको २३ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले सहकारीको विकाससँगै चुनौती पनि आउने गरेकाले समस्यालाई समाधान गर्न सुझाव समेत दिए । छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गरी आर्थिक विकासमा लगानी गर्न सहकारीको भूमिका सह्रानीय रहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, मोरङ क्षेत्र नं. १ का प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्बा लिम्बू (कुशल) ले शेयर सदस्यले भत्ता लिने अनि साधारणसभामा नबस्ने प्रवृत्तिले संस्थाको विकास नहुनेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे । उनले सहकारी गरीब तथा विपन्न समुदायको घरघरमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा उर्लाबारी नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी भण्डारी, सल्लाहकार गंगाप्रसाद बास्तोला, महिला उत्थान साकोसकी अध्यक्ष सर्सू गुरुङलगायतले बोलेका थिए ।
संस्थाका अध्यक्ष ढकबहादुर थापाको सभापतित्वमा भएको उक्त साधारणसभाको सञ्चालन सचिव रामकुमार बुढाथोकीले गरेका थिए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य उपाध्यक्ष इन्दिरा राईले गरेकी थिइन् भने सोही अवसरमा उत्कृष्ट कारोबार गर्ने शेयर सदस्य, उत्कृष्ट कर्मचारीलगायतलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।